नेपालीभाषी भुटानीको धम्की, 'ह्वाइट हाउस ध्वस्त पार्छौं !' | MYAGDINEPAL
Home / प्रवास / नेपालीभाषी भुटानीको धम्की, 'ह्वाइट हाउस ध्वस्त पार्छौं !'
नेपालीभाषी भुटानीको धम्की, 'ह्वाइट हाउस ध्वस्त पार्छौं !'
न्युयोर्क , वैशाख ३ - गत शुक्रबार ३० जना यात्रु बोकेको 'ग्रेहाउन्ड बस' न्युयोर्क राज्यको बफेलोबाट ओहायो राज्यको क्लेभल्यान्डतर्फ गुडिरहेको थियो । बसमा सवार एक व्यक्तिले अमेरिकाको आकस्मिक टेलिफोन नम्बर '९११' मा फोन डायल गरे । एक रिङमै फोन उठेपछि डायलकर्ताले भने 'मेरो नाम गुरु धिमाल, म अलकायदाको तर्फबाट ।' जबाफमा आकस्मिक सेवाका कल रिसिभरले अचम्भित स्वरमा भने, 'ओके' । अन्य कलहरूको व्यस्तता एवम् धिमालको अंग्रेजी लवजको अस्पष्टताका कारण फोन रिसिभरले भने, 'आई एम सरी, गो अहेड, सर ।'
त्यसपछि धिमालले भने, 'मसँग वासिङटन डीसीमा आतंकवादी प्रदर्शन गर्ने मेजर प्लान छ । हामीसँग बमले वासिङटन डीसीको ह्वाइट हाउस ध्वस्त पार्ने योजना छ ।' त्यसपछि फेरि ९११ का फोन रिसिभरले सोधे, 'अहिले तिमी कहाँ छौं ?' धिमालले उत्तर दिए, 'म अहिले बसमा छु, ओहायो राज्यमा छु ।' फोन रिसिभरले अर्को प्रश्न गरे, 'के गरिरहेका छौं रे' ? धिमालले उही डरलाग्दो कुरा दोहोर्‍याए, 'हामीसँग आगामी मे १ मा ह्वाइट हाउस ध्वस्त गर्ने योजना छ ।' ९११ बाट फेरि प्रश्न गरियो 'ओहायोको कुन क्षेत्रतिर गइरहेका छौं ?' यसपल्ट धिमालले केही जबाफ दिएनन् ।
'म यहीं छु, अरू के सहयोग गर्न सक्छु सर ?' रिसिभरले सोधे । जबाफमा धिमालको धम्की केही हल्का भयो, 'आतंकवादीहरू यो क्षेत्रमा आएका छन् र उनीहरूको ह्वाइट हाउस ध्वस्त पार्ने योजना छ ।' उनले पटक पटक एउटै भनाइ दोहोर्‍याइरहेपछि रिसिभरले भने, 'तिमीले यसअघि नै ह्वाइट हाउस ध्वस्त पार्ने योजनाबारे बताइसकेको हैन र ?' धिमालले ढुक्कै जबाफ दिए, 'हो ।'
फेरि प्रश्न आयो, 'तिमी अहिले ग्रेहाउन्ड बसमा छौं, हो ?,' धिमालले भने, 'हो, म अहिले क्लेभल्यान्ड नजिकै छु ।' फक्स न्युजमा प्रसारण गरिएको करिब साढे पाँच मिनेटको फोनवार्तामा दोहोरो संवाद गर्ने व्यक्ति थिए, नेपालीभाषी भुटानी २८ वषर्ीय गुरु धिमाल । न्युयोर्कको स्याराकुसमा बस्दै आएका धिमाल र ९११ अपरेटरबीचको संवाद भएको सात मिनेट पनि नबित्दै प्रहरीले बस रहेको क्षेत्र '९० इन्टरस्टेट' नियन्त्रणमा लिएको फक्स न्युजको क्लिभल्यान्ड संस्करणले जनाएको छ ।
विशेष बम स्क्वाडले बसमा खानतलासी लिए पनि केही विफोस्टक वस्तु नभेटिएको जनाइएको छ । प्रहरीले धिमालसहित बसमा उनीसँगै रहेका ओहायोको कोलम्बस क्षेत्रमा बस्ने ६७ वषर्ीय भगीरथ कोइरालालाई पनि पक्राउ गरेको थियो । कोइरालालाई सोमबार नै धरौटीमा रिहा गरिएको छ भने धिमाललाई २५ हजार धरौटी तोकिएको छ । हाल, उनको मानसिक अवस्थाबारे अनुसन्धान गरिँदैछ ।
कान्तिपुर सँगको कुराकानीमा न्युयोर्कस्थित स्याराकुस भुटानी समाजका एक सदस्यले धिमालको मानसिक अवस्था असन्तुलित
रहेको बताए । अमेरिकी सरकारको भुटानी शरणार्थी पुनर्वास कार्याक्रमअन्तर्गत सन् २००८ मा अमेरिका आएका धिमाल केही समयपछि डिप्रेसनमा परेका थिए ।
झापाको गोलबन्दी शरणार्थी शिविरमा रहँदा हिन्दु धर्मावलम्बी रहेका धिमालले अमेरिकामा क्रिस्चियन धर्म अंगालेका थिए । कलेज भर्नासमेत भएका धिमाललाई एक अश्वेत युवाले कुटेपछि उनको मानसिक अवस्था असन्तुलन भएको ती सदस्यको भनाइ छ । अमेरिकामै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका धिमाल आफ्ना चार दाजुभाइसँग बस्दै आएका थिए । घटनाबारे डीसीस्थित नेपाली दूतावासले कुनै जानकारी नभएको बताएको छ ।